Ciidamo An La Garaneynin Oo Watay Diyaaradaha Dagaalka Ee Helakobtariska Oo Waaberigii Saaka Weerar Ku Qaaday Guri Ku Yaala Degmada Baraawe | Salaan Media
Ciidamo An La Garaneynin Oo Watay Diyaaradaha Dagaalka Ee Helakobtariska Oo Waaberigii Saaka Weerar Ku Qaaday Guri Ku Yaala Degmada Baraawe
Oct 5,2013 Muqdisho(SM) Diyaarado dagaal oo aan la ogeyn dalka laga leeyahay ayaa waaberigii hore ee saaka weerar ku qaaday guri ku yaala degmada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose halkaasi oo ay ku sugnaayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda argigixisada ah ee Al-Shabaab.
Weerarkan ayaa la sheegayaa in ay geyteen ciidammado aan la garaneyn dalka ay ka socdaan, waxa uuna dhacay saaka waqtigii salaadda Subax, iyadoo uu ka dhacay guri ku yaala agagaarka dhinaca xeebta ee magaalada Baraawe oo ka mid ah saldhigyada horjoogayaasha kooxda Al-Shabaab oo muddooyinkii la soo dhaafay kusoo koobmay magaalooyin cayiman.
Weerarka ayaa socday muddo ka yar saacad, waxaana gudaha magaalada Baraawe laga maqlayay sida ay ku warameen dad goobjooyaal ah madaafiic, iyadoo guriga la bar tilmaameydsanayey maleeshiyaadkii ilaalada ka hayed ay sameeyeen iska caabin, waqtigaasi kadib ayuu sii xoogeysatay dagaalka dhexmarayay maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo ciidammada ajaanibta ah ee soo weeraray, waxaana dagaalka ku soo biiray diyaaraha nooca Qumaatiga u kaca ee Helcopterka.
Dhinaca khasaaraha weerarka aroortii hore ee saaka ka dhacay Baraawe ayaa la sheegaya in ilaa hadda la ogyahay dhimasha hal qof iyo dhaawac laba kale oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii Iskacaabinta sameynayey ee Al-Shabaab.
Qaar ka mid ah dadka ku sugan magaalada Baraawe ayaa sheegaya in xaaladda ay aad u kacsan tahay, iyadoo maleeshiyada magaalada ku sugan ay bilaabeen baaritaannada xaafadaha magaalada iyo in ay xiraan waddooyinka soo gala kana baxa magaalada Barwaawe ee gobolka Shabeellada Hoose.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo magaalada Baraawe ayaa sheegaya in weerarka kadib ay dhacday duqeyn ay geysanayeen diyaarado la socday ciidammada weerarka soo qaaday, kuwaas oo muddo ka dagaallamayay gudaha magaalada, taasi oo la sheegayo in ay cabsi iyo wel wel hor le ku abuurtay horjoogayaal la rumeysanyahay in ay ku sugan yihiin magaalada Baraawe.
Guriga ay ciidammada aan la ogeyn dalka ay socdaan beegsanayeen ayaanan la xaqiijin cidda ku sugnayd oo ay bartilmaameedsanayeen, waana guri dhinaca galbeedka ka xiga xeebta magaalada Baraawe, hasa yeeshee goobjoogayasha ayaa tilmaamay in ay suuragal tahay in guriga ay ku jiraan horjoogayaal Shabaab ka tirsan, hasa yeeshee aan la sheegi karin cidda ay yihiin.
dabayaaqadii Bishii June ayaa magaalada Baraawe lagu dilay laba horjooge oo kala ahaa Ibraahim Xaaji Jaamac Miicaad “Ibraahim Afqaan” iyo Macalin Burhaan, oo uu dilkooda caddeystay in uu ka dambeeyay horjoogayasha Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana magaaladaasi isaga soo baxay horjoogayaal kale oo uu ka mid ahaa Xasan Daahir Aweys oo isu soo dhiibay dowladda